डाक्टरले बिरामीलाई यथार्थ कुरा भन्नु कति उचित हुन्छ ? Nepalpatra डाक्टरले बिरामीलाई यथार्थ कुरा भन्नु कति उचित हुन्छ ?
डाक्टरले बिरामीलाई यथार्थ कुरा भन्नु कति उचित हुन्छ ?
विरामी ज्वरो आएर अस्पताल पुग्छ
उसलाई ब्लड चेकजाँच गर्दा साल्मोनेला पाराटाइफाइड र टाइफस १.८० माथि भए टाइफाइड भन्ने चलन छ । तर अहिले वर्तमान अवस्थामा कोभिड-१९ फैलिएको छ । टाइफाइड भएका व्यक्तिलाई कोरोना पनि हुन सक्छ । तर उपचार गर्दा कोरोनाको नभई लक्षण अनुसार ज्वरोको उपचार गर्नुपर्दछ ।
विरामी पेट दुखेर डाक्टर कहाँ पुग्नासाथ पहिलो प्राथमिकता रोग परिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रोगको परिक्षण गर्दा
भिडियो एक्सरे, इण्डोस्कोपी र ल्याब परिक्षण गरेर पेटको समस्या हेरेर उपचार गर्नुपर्छ । पेट दुख्नुको धेरै कारणमध्ये एपेण्डि साइटस पनि एक हो तर यो दायाँ साइडमा हुन्छ । यसैगरी पेटको अल्सरमा दिसामा रगत देखिन सक्छ । दिसामा रगत देखिनुको अर्को कारण पाइल्स पनि हुन सक्छ ।
यस्तो समस्या देखिएमा के गर्ने ?
दिसा चेक गर्ने
ल्याबको परिक्षण गर्ने
लक्षण अनुसार उपचार गर्ने ठिक नभए पेटको बिशेषज्ञलाई देखाएयर अल्सरको उपचार सुरु गर्ने गर्नु पर्दछ ।
केस नम्बर ३
टाउको किन दुख्दछ ?
टाउको दुख्नुको कारण धेरै हुनसक्छ । कहिलेकाहीँ जुकाका फूलहरू टाउकोमा चडेमा पनि टाउको दुख्छ । आँखाको कमजोरीले पनि टाउको दुख्न सक्छ । ब्रेन क्यानसरमा पनि टाउको दुख्न सक्छ । चियाको लतले पनि टाउको दुख्न सक्छ । लागु औषध सेवन गर्नेहरूलाई पनि टाउको दुख्न सक्छ ।
यस्ता समस्या देखिएमा कस्तो उपचार गर्ने ?
आँखा चेक गराउने, ल्याब टेष्ट गराउने, दिसा पिसाब चेकजाँच गर्ने । राम्रो अनुभवी डाक्टरको परामर्शमा खमा टाउको सम्वन्धी डाक्टरलाई चेक गराएर उपचार गर्ने ।
आज हामीले जति पनि बिरामीको उपचार गर्दछौं त्यसको पछाडि सवैभन्दा ठूलो भूमिका विश्वासले गर्दछ । एउटा चिकित्सक जतिसुकै दक्ष किन नहोस् उसप्रति विरामीको विश्वास र डाक्टरले बिरामीलाई गर्ने व्यवहारले यो कुरा प्रष्ट पार्ने गरेको लामो अनुभव छ ।
उपरोक्त विवरणले एउटा कुरा प्रष्ट हुन्छ की रोगको सही जानकारी कतिपय अवस्थामा विरामीलाई सबै भन्नुपर्छ भन्ने छैन । अति खतरनाक समुहको रोगलागेको छ भने बिरामीलाई भन्नु् गलत हो ।